Fampandrosoana isam-paritra ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Taorian’ny fihibohana lavareny teto an-drenivohitra dia mba nisintaka nanaraka iny lalam-pirenena faharoa iny. Iny moa no nisokatra voalohany ka dia nanjohy iny lalana miatsinanana iny. Andasibe no antondia. Malaza amin’ny valan-javaboary arovana : biby sy zavamaniry tsy fahita raha tsy any, eto Madagasikara na eto an-tany aza angamba.
Ny RN2, lalam-pifamoivoizana dia hita ho manomboka velom-bolo noho ny fifamezivezen’ireo fiara sy mpandeha maro. Ao ireo voatana tany amin’ny toerana samihafa dia mamonjy fodiana ; ao ireo mihataka kely ny toerana nihibohana ka mila miova rivotra kely any anaty ala. Tsapa ho velom-bolo ny olona satria toa zary hafaliana ny tafahaona indray, toy ny mpianakavy ela tsy nifankahita. Na tsy mifankahalala aza toa mpihavana tsy hifankafoy rehefa tafahaona.
Ireo trano fihinanana dia manomboka mandray ireo mpandeha ary miezaka manolotra izay tsara ho azy ireo. Ny tanàna nivelona tamin’ny varotra fifanakalozana dia ahitana indray ireo mpivarotra misarika mpandeha fa samy te-hahalafo sakafo masaka na voankazo samihafa nampiavaka iny lalam-pirenena iny. Izany fisehoan-javatra izany no ahalalana ny fifampiankinan’ny faritra samihafa eto Madagasikara, ary dia lalan-dra mamelona ny lalana.
Andasibe-Mantadia dia malaza noho ny fizahantany sy ireo trano fandraisam-bahiny hatrany anaty ala any. Tsinjo ombieny ombieny ireny tranobe naorina hifanaraka amin’ny tontolo iainana. Fotoana fohy no nitsidihana ny toerana ka tsy afaka hitantara ny harena sy hakanton’ny zavaboary. Na izany aza, rehefa miresaka aman’olona dia toa mahazo vahana amin’ny fizahantany ao Andasibe ny tolotra momba ireo biby tsy fahita firy : « lémuriens, ny indris sy ny karazany ». Andasibe-Analamazaotra, Andasibe-Mantadia koa anefa dia valan-javamaniry sy karazan-kazo samihafa. Toerana mamelana maitso mandavan-taona noho ny toe-tany sy toetr’andro mando lava. Rehefa miresaka valan-javaboary arovana isika, araka izany, dia maro ireo karazan-javamaniry tena mila arovana satria ala no nahafantarana ny atsinanana. Ny fiainan’ny olona amin’io faritra io dia miankina amin’io valan-javaboary io. Mahantra izy dia miara-mahantra amin’io ; velona dia miara-velona amin’io.
Raha tarafina indray mijery anefa Andasibe tanàna dia ilay lalam-by nahasarika olona maro, nefa toa nitsaha-ketrika toy ny sosoa voatampo-drano no manaitra. Ilay gara sy trano fivantanan’ny olona, tsara voatra, moderina tokoa, saingy haolo noho ny olan’ny fitaterana an-dalam-by. Ny orinasa Madarail moa tsy nahatontosa ny andraikiny ka ireo mpitatitra entana sisa mandalo ; ny olona anefa no harena voalohany.
Toerana manana ny anjara toerany eo amin’ny firenena Andasibe : vakoky ny ala sy zavaboary voajanahary mila arovana ; vavolombelon’ny tantaran’ny ala atsinanana noheverina tsy ho lany ; toerana iroboroboan’ny fizahantany azo ankalazaina ; azo hanorenana toeram-piofanana sy fikarohana samihafa mifandraika amin’ny mampiavaka azy na harena voajanahary na toe-tany na toetr’andro na ny tantaran’ny fahagola mety ho hita amin’ny taolam-balon’ny hazo sy ala ary biby. Fa lalana mitondra amin’ny fandinihana ny fampandrosoana isam-paritra mirindra sy mifandanja ihany koa.
Rahoviana angaha vao ho haintsika ny hanome lanja ny foto-piainantsika dia ny « tany, ny rano, ny masoandro, ny rivotra » ? Na resaka jiro, na famoronana asa, na fikarohana, na fampivoarana na fiainam-pirenena dia azo tarafina amin’ny fitantanana an’Analamazaotra-Mantadia. Raha tsy voadinika dieny izao anefa ireny dia hitohy ny faharavana. Ireo toeran’ny fandraharahana ara-pizahantany sisa valan-javaboary azo tsidihina ; ary dia ho ritra ihany ny ala atsinanana.